"परदेशी साइलो" बोलको गित सांगीतिक बजारमा..! | जनदिशा
“परदेशी साइलो” बोलको गित सांगीतिक बजारमा..!
काठमाडौं । लोकगायक बिष्णु खतिवडाको ‘परदेशी साइलो’ बोलको गित सांगीतिक बजारमा भित्राइएको छ । परदेशीको कहानीमा आधारित उक्त गितलाई म्युजिक नेपालको आधिकारिक युटुब च्यानलबाट सांगीतिक बजारमा भित्राइएको हो ।
यस लोकदोहोरी गितमा गायक बिष्णु खतिवडा र गायिका लक्ष्मी परियारले आवाज भरेका छन्र । सो गीतमा शब्द तथा संगीत गायक खतिवडा आफैले गरेका हुन् । परदेशीको पिडा समेटेर तयार गरिएको हुँदा उक्त गीतलाइ सम्पूर्ण शुभचिन्तकले मन पराउने गयिका लक्ष्मी परियारले अपेक्षा गरेकिछिन् ।
निर्देशक सुजन श्रेठ द्वारा निर्देशित म्युजिक भिडियोमा कलाकार रिना थापा, श्याम क्षेत्री, शान्ति मगर र शुसान्त मगरले अभिनय गरेका छन् । पछिल्लो समय निर्देशक श्रेठले विभिन्न गीतको भिडियोबाट निर्देशन गर्दै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भैसकेका छन् । साथै यस गीतलाई हेरेर सबैले सेयर गर्दै प्रतिक्रिया दिन निर्देशक श्रेठले सम्पूर्णमा अग्रह गरेका छन् ।
Previous Previous post: अवरुद्ध भेरी करिडोर सञ्चालनमा
Next Next post: नयाँ क्यान्सर अस्पताल बन्ने